Haddii ay kula soo gudboonaatay dhacdo halis ah - Malmö stad
Dadka badankiisa ayay mar uun dhibaato la soo gudboonaataa. Sida uu qofku u dhaqmo xilligaa iyo inta ay dhibaatada socoto ayaa kala duwan marka loo eego qof kasta. Khibradda uu qofku horey u lahaa ayaa micne u sameyneysa siduu qofku u arko una maareeyo dhibaatooyinka soo food saarta. Dhibaatada ayaa ah falcelin caadi ah oo ka timaada xaaladda adag. Waxaa muhima inaad la socoto inaysan jirin falcelin saxa ama khalada, sababtuna waa dadkoo kala duwan. Kaligaa ma tihid waxan jira gargaar aad heli karto.
Falcelinta caadiga ah marka ay dhibaato timaado + –
Qofka ay la soo gudboonaato dhibaato weyn wuxuu dareemi karaa dareen xoog leh oo murugo, walwal, cabsi iyo carro. Wakhtiga ugu horeeya ayuu qofku dareemi karaa dareen aan macquul ahayn. Jirka qofka ayaa sameyn kara falcelin iyadoona ay wakhti badan ku qaadan karto inuu jirto soo dego. Dad qaar bay hurdadu ka xumaataa, iyagoona dareema walwal iyo walbahaar ama waxay dareemaan inay yihiin danbiilayaal iyo ceebeysanayaal. Dareenka ayaa noqon kara mid kacsan oo yimaada haddana taga. Waxa mararka qaar la dareemi karaa kalsooni. Waa caadi inuu qofku lumiyo feejignaanta, ay dhib ku noqoto qaadashada warbixinta iyadoona waxyaabo sida caadiga ugu sahlanaa – ay si kadisa u noqdaan kuwo adag oo dhib leh. Sidaa darteed waxaa muhim ah inuu qofku xilligaa si gooni ah ugu naxariisto naftiisa iyo jirkiisa si uu dib ugu helo dheelitir.
Tallooyinka qofka ay dhibaatada soo wajahdo + –
Soo dhoweyso dadka badbaadada ku siinaya. Xataa xayawaanka guryaha lagu heysto ayaa muhim kuu noqon kara. Haddii ay adkaato inaad hesho dad aad ku dhowaato, isticmaal kanaalada dijitaalka si aad u hesho xiriir qoys, axsaab, saaxibo shaqo ama dad kale ee aad jeceshahay.
Samee dhaqdhaqaaq jirka dejiya. Waxaad tusaale ahaan isticmaali kartaa hababka nasashada iyo yoga. Dad badan oo qaba walaac xoog leh waxaa caawiya socodka lugta ah. Dhaqdhaqaaqyada kale waxay noqon karaan inaad aaddo bey’adda, dhageysato muusig, rinjiyeynta, shaqooyinka gacmaha, wax dubidda, abuurista ama wixii kalee adiga ku caawinaya. U fiirso howlaha adiga ku dejinaya oo aad badbaadada ku qabto, isku day inaad hordhiso howlahaa.
Isku day inaad waddo ruutiino qaasa, sida inaad lugeyso maalin kasta ama inaad quraac cunto mar kasta. Yaree shuruudaha culeyska kugu ah hadda. Caawimaad ka raadso dadka kale haddii aadan adigu awoodin.
La xiriir dadka aad ku kalsoon tahay una sheeg inaad hadda wakhti adag ku jirto. Haddii aad dareento inay caafimaadkaada wax u dhimeyso inaad ka hadasho wixi dhacay, xaddid goorta iyo sida aad uga hadasho. Waajib kaama saarna inaad dadkoo dhan wax kasta uu sheegto. Haddii ay kugu habboon tahay ku qor dareenkaada buug xusuus qora.
Xadid qaadashada waxyaabaha ku dhibaya. Tusaale ahaan wararka waxyaabaha dhaca ama inaad daawato fiidiyow ama ku celcelinta dhageysiga sheekooyinka waxyaabaha dhacay.
Haddii ay suura gal kuu tahay iska ilaali gaaridda go’aamada waaweyn ee nolosha ama inaad isbeddelo weyn ku sameyso noloshaada bilaha soo socda.
Xilliga uu yimaado culeyska waxa muhima inaad isi siiso wakhti iyo daryeel dheeri ah. U sheeg naftaada inaaney mar walba nolosha sidaan u adkaan doonin iyo inay shucuurtu iman karto isla markaana tagi karto. Ula dhaqan naftaada sida aad ula dhaqmi laheyd saaxiib aad aad u jeceshahay.
Haddii aad ka walwasho falcelintaada, aad leedahay xannuun jir ahaaneed ama aad u baahan tahay taageero ka duwan tan aad ka hesho dadka kugu xeeran, raadso markaa gargaar xirfadeed. Haddii aadan kalsooni u hayn gargaarka xirfadeed ee aad hesho, ka hadal taa ama iska beddel dhakhtarka, kalkaalisada caafimaad, dhakhtarka cilmi nafsiga ama la taliyaha. Caawimaad ka doono dadka kale haddii aad xaalad adag gasho.
Ka fakar carruurta + –
Haddii ay carruur ku ag joogto waxaad gacan ka geysan kartaa ammaanada ilmaha ku jira xaaladda adag. Haqabtir baahida degdegga ee carruurta. Hubso inuu ilmuhu helo hurdo ku filan, si wanaagsan wax u cuno una cabo iyo inuu helo dhaqdhaqaaq jir oo ku filan.• Wakhti sii aad ku eegto ilmaha ugana jawaab su’aalaha si la taaban karo oo u qalanta da’da ilmaha.• Ka xaddid carruurta waxyaabaha cabsida u keena, wararka iyo sawirada xunxun ama ka hadalka wax dhacay.
Laabta ku qabo carruurta, soo qabo oo kordhi wakhtiga ay dhabtaada ku fadhiyaan.
La joog ilmaha si ay u fahmaan inaad halkaa iyaga dartood u joogto. Wax la samee carruurta; kubad la ciyaar, wax wada aqriya, ciyaara oo wax sawira.
Isku day inaad joogteyso ruutiinada inti aad ka karto marka loo eego xaaladda taagan, maadaama ay joogteyntu u taagan tahay sida ay caadiyan wax u dhacaan isla markaana ay muhim u tahay soo celinta degenaashaha iyo xasiloonida.
Xarunta dhibanaha danbiga loo geysto iyo dhexdhexaadinta + –
Haddii uu danbi kaa falay qof sokeeye kuu ah ama qof aadan garaneyn, marqaati aad ka noqotay danbi, ama aad tahay ehel ama qaraabo qof danbi laga galay waxaad xarunta dhibanaha danbiga loo geysto iyo dhexdhexaadinta ka heleysaa taageero wadahadal iyo ka shaqeynta dhibaatada. Waa lagu soo dhoweynayaa iyadoon loo eegin inaad ashkato boliis ka sameysay dhacdadaa iyo in kale. Waxaad noqon kartaa qof aqoonsigiisu qarsoon yahay. Waa lacag la’aan gargaarka oo dhan waxaadna codsan kartaa turjubaan ku hadla afkaada hooyo.
La xiriir xarunta dhibanaha danbiga loo geysto iyo dhexdhexaadinta saacadaha maalinta maalmaha shaqada si aad u qabsato ballan turjubaan:
Telefoon: 040-34 92 92
Xarunta xaaladaha adag ee yimaada + –
Haddii aad ku nooshahay Malmö isla markaana uu qof kugu dhow kuu geystay cunfi, hanjabaad ama meel ka dhac waxaad la xiriiri kartaa xarunta xaaladaha adag ee yimaada. Waa la caawinayaa xataa haddii aad tahay qof ku soo jiray ama hadda ku jira xiriir dhibaata leh ama carruurta marqaati ka noqotay cunfi ka dhacay guriga. Sidoo kale si laguu caawiyo waxaad la xiriiri kartaa xarunta haddii aad dhibaato ku qabto xasarad badan isla markaana aad u hanjabtay, gacan ula tagtay, meel ugu dhacday ama cabsi galisay qof qoyskaada ka tirsan. Waa lacag la’aan gargaarka oo dhan waxaadna codsan kartaa turjubaan ku hadla afkaada hooyo.
La xiriir xarunta xaaladaha adag ee yimaada saacadaha maalinta maalmaha shaqada si aad u qabsato ballan turjubaan:
Telefoon: 040-97 06 07
Kooxda la tashiga + –
Haddii aad ku nooshahay Malmö isla markaana aad ku nooshahay nolol laguu hanjabo ama aad dooneyso inaad ka baxdo nolol danbiyeed waxaad gargaar ka heli kartaa kooxda la tashiga ee Malmö. Waa lacag la’aan gargaarka oo dhan waxaadna codsan kartaa turjubaan ku hadla afkaada hooyo.
La xiriir kooxda la tashiga saacadaha maalinta maalmaha shaqada si aad u qabsato ballan turjubaan:
Telefoon: 040-34 05 50
Heeganka bulshada + –
Heeganka bulshada ayaa ka shaqeeya arrimaha bulshada ee degdega u yimaada wakhtiga ka danbeeya saacadaha xafiiska marka uu xiran yahay xafiiska adeega bulshada caadiga ee xaafaddaada fiidki, habeenki iyo maalmaha fasaxa. Arrimaha degdega waxay noqon karaan cunfi ka dhaca guriga, walaac daran ee la xiriira carruur la waxyeeleynayo ama dad qaba dhibaatada balwada. Waxaad kaloo heeganka bulshada la xiriiri kartaa si aad u hesho warbixin, talo siin ama wadahadal gargaar. Waa lacag la’aan gargaarka oo dhan waxaadna codsan kartaa turjubaan ku hadla afkaada hooyo.
La xiriir heeganka bulshada ee xaaladaha degdega fiidkii, habeenkii iyo maalmaha fasaxa:
Telefoon: 040-34 56 78
Halkan ayaad ka heli kartaa talo iyo gargaarka daryeelka caafimaadka: + –
Daryeelka caafimaadka asaasiga, xarunta xiriirinta, gobolka Skåne, codso rugtaada caafimaad, telefoon: 044-309 30 00
1177 Hagaha daryeelka, telefoon: 1177
Qaabilaadda caafimaadka dhimirka dadka qaan gaarka ah, gobolka Skåne, telefoon: 040-33 53 00
Rugta caafimaadka dhimirka carruurta iyo dhalinyarada, gobolka Skåne, telefoon: 020-51 20 20
Waxaad halkan ka heli kartaa tallooyinka iyo gargaarka urrurada samafalka ee telefoonka heeganka oo afaf kala duwan + –
Heeganka dadka danbiyada laga galo, haddii laguu geystay danbi. Telefoon: 116 006
Terrafem, hadduu cunfi kuu geystay qof aad la leedahay xiriir dhow. Telefoon: 020-52 10 10
Bris, haddii aad adiga qaan gaarka ah qabto su’aalo ku saabsan caruurta iyo dhalinyarada ee jira ugu badnaan 18 sano. Telefoon: (carabi oo keliya) 077-448 09 00
Bris, telefoon heegan ah, chatt iyo wadahadal la taliye bulsho ee carruurta. Telefoon:116 111
Xaaladaha deg dega
Xaaladaha deg dega, wac 112 markuu caafimaadkaadu aad u xumaado, ama aad isku aragto fikrado inaad is disho ama qorshooyin is dil. Sidoo kale wac 112 hadduu qof kugu dhow caafimaad darro la kulmo taasoo keeni karta inuu halis ugu jiro inuu is dhaawaco isaga ama qof kale dhaawac u geysto.
Krisstöd vid arbete under extrem stress. Johansson, S & Holmgren, E. Parus förlag (2020)
Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser: Att stärka människors motståndskraft. Hedrenius, S & Johansson, S. Natur & Kultur (2013)
Psychological First Aid: Field Operations Guide, 2nd Edition. National Child Traumatic Stress Network & National Center for PTSD (2006)
Psykologisk första hjälp: Användarinstruktion, andra utgåvan. Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP (2006)
Så stöttar du någon i kris. Svenska Röda Korset. www.rodakorset.se (2020)
Till barn som varit med om en otäck händelse. Adebäck, P. Regionalt kunskapscentrum Kris- & katastrofpsykologi, Stockholms läns landsting (2017)